परमेश्वरको राज्यको लागि किन प्रार्थना गर्नुपर्छ? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चुभास चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मले माया मालागासी माल्टिज मूर म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
परमेश्वरको राज्य आओस् भनेर किन प्रार्थना गर्नुपर्छ?
के तपाईं परमेश्वरको राज्य र यस राज्यले गर्ने कामबारे बुझ्न चाहनुहुन्छ?
परमेश्वरको राज्य स्वर्गबाट शासन गर्ने एउटा सरकार हो। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई परमेश्वरको राज्य आओस् भनी प्रार्थना गर्न सिकाउनुभयो। किनभने परमेश्वरको राज्यले मात्र पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन र संसारभरि परमेश्वरको स्तर स्थापित गर्न सक्छ। कुनै पनि मानव सरकारले हिंसा, अन्याय र रोगबिमारलाई निर्मूल पार्न सक्दैन। तर परमेश्वरको राज्यले भने यी सबै समस्याहरू हटाउन सक्छ र हटाउने पनि छ। परमेश्वरको राज्यको राजा हुन उहाँले आफ्नो छोरा येशूलाई छान्नुभएको छ। साथै यहोवा परमेश्वरले येशूसँगै शासन गर्न उहाँका चेलाहरूको एउटा सानो समूहलाई पनि छान्नुभएको छ।—लूका ११:२; २२:२८-३० पढ्नुहोस्।
अब चाँडै परमेश्वरको राज्यले उहाँको शासनको विरोध गर्ने सबैलाई नाश गर्नेछ। त्यसैले परमेश्वरको राज्य आओस् भनी प्रार्थना गर्नु भनेको सबै मानव सरकारको सट्टा परमेश्वरको सरकारले मात्रै पृथ्वीमा शासन गरोस् भनी अनुरोध गर्नु हो।—दानियल ७:१३, १४; प्रकाश ११:१५, १८ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरको राज्यले मानिसहरूलाई कसरी लाभ पुऱ्याउँछ?
येशू दयालु हुनुभएकोले उहाँ राजा हुन योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको छोरा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले मदतको लागि परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने सबै मानिसहरूलाई मदत गर्ने शक्ति पनि येशूसित छ।—भजन ७२:८, १२-१४ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरको राज्य आओस् भनी मनैदेखि प्रार्थना गर्नेहरू र परमेश्वरको इच्छाअनुसार जीवन बिताउनेहरूले परमेश्वरको राज्यबाट लाभ उठाउनेछन्‌। परमेश्वरको राज्यबारे बाइबलले बताउने कुरा सिक्नुभयो भने तपाईंले कहिल्यै पछुतो मान्नुपर्ने छैन।—लूका १८:१६, १७; यूहन्ना ४:२३ पढ्नुहोस्।
न्यायको दिन भनेको के हो?
मानवजातिको भविष्य कस्तो छ?
हामीले येशूको मृत्युको सम्झना किन गर्नु पर्छ?
संसारभर एउटै सरकार सम्भव छ?